एप्पल र Leek Vichyssoise - Thermomix रेसिपीज ThermoRecines
एप्पल र Leek Vichyssoise
सूप्स43 मिनेट4 व्यक्ति
हाम्रो रेसिपी पुस्तकमा त्यहाँ क्रीमहरू प्रशस्त छन्, तर यो स्याउ र लीक विचिसोइज मनपर्नेहरू मध्ये एक हो। यो एक चिल्लो र धेरै धनी स्वाद छ र छ तातो दिनको लागि आदर्श हो किनकि यो चिसो लिईन्छ।
यदि क्लासिक आलु र लीक vichyssoise तपाइँले यो मनपराउनु भएको छ कि तपाइँले यो प्रयास गर्नुपर्नेछ किनभने अवयव आश्चर्य को संयोजन सबैलाई।
यसले हामीलाई सिर्जना गर्न प्रेरणाको रूपमा पनि काम गरेको छ अन्य स्वादिष्ट क्रीम यसले तपाईंलाई स्वस्थ आहार लिन मद्दत गर्दछ।
1 एप्पल र Leek Vichyssoise
अर्को गर्मी को लागी
खाना पकाउने समय: 38M
कुल समय: 43M
Large ठुलो leeks को सेतो भाग
Green हरियो स्याउ (म गोल्डन प्रयोग गर्दछ)
G 60 ग्राम जैतुनको तेल
१ वाष्पीकरण गरिएको दुधको
खाना पकाउन 200 ग्राम क्रीम
हामी चुँडा धोएर टुक्रा टुक्रा पार्छौं। सीललाई les टुक्रामा काट्नुहोस् र काट्नुहोस्।
हामी गिलास र कार्यक्रममा तेल राख्छौं Minutes मिनेट, तापमान १०० र गति १।
लीकहरू र प्रोग्राम थप्नुहोस् २ मिनेट, º ०º तापमान र गति १ मा।
हामी स्याउ सामिल गर्दछौं, हामी प्रोग्राम गर्दछौं १० मिनेट, तापक्रम १००º र गति।।
हामी पानी र नुन र मरिच जोड्छौं। हामी प्रोग्राम १० मिनेट, तापक्रम १००º र गति।।
समयको अन्तमा, हामी पीच्दछौं प्रगतिशील गति -1-१० मा १ मिनेट।
हामी यसलाई केहि मिनेटको लागि विश्राम दिन्छौं ताकि तापक्रम ड्रप हुन्छ र जब यो º०º मा हुन्छ, हामी वाफ गरिएको दुध र क्रीम थप्दछौं। हामी प्रोग्राम Minutes मिनेट, वेग without, तापक्रम बिना।
यसको लागि हामीलाई केही नुन चाहिन्छ कि भनेर हेर्नको लागि हामी जाँच गर्छौं। फ्रिज चिसो हुन दिनुहोस्।
थप जानकारी - Vichyssoise / एक स्वादिष्ट vichyssoise बनाउन9विभिन्न तरिकाहरू
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: सजिलो, १ घण्टा भन्दा कम, गर्मी रेसिपी, सूप र क्रिम
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » सामान्य » सजिलो » एप्पल र Leek Vichyssoise
Mmmmm कस्तो राम्रो देखिन्छ !!! म यो लेख्छु !!!
आइनालाई जवाफ दिनुहोस्
मेरी कारमेन Harfuch भन्यो
इलेना र सिल्भिया:
यो प्रविष्टिहरू मिक्स गर्न यो कहिले पनि भएको थिएन, म पहिले नै राती मेरो पतिलाई आश्चर्यचकित गर्न तयारी गर्दैछु; मलाई थाहा छ यो स्वादिष्ट हुन्छ
मेरी कारमेन Harfuch जवाफ
नमस्ते मेरी कारमेन, तपाई कस्तो हुनुहुन्छ? तपाईंलाई यो मन पर्यो?
नमस्ते! हो, सामग्रीहरू आश्चर्यजनक छन्, तर कति वाष्पीकरण गरिएको दुधको यो छ? मैले लिडलबाट एउटा किनेको छु, र मलाई लाग्छ कि त्यहाँ अन्य ब्राण्डहरूबाट अन्य रकमहरू छन्।
हेलो राकेल, मैले नेस्ले ब्रान्डबाट एउटा प्रयोग गरें र यो 410१० जीआर जार हो। शुभकामना।
मोनिका जार्डे भन्यो
नमस्कार एलेना, मैले भर्खर यो गरेँ, म तिमीलाई भोलि बताउँछु तर यो गन्ध राम्रो भयो!
मोनिका जार्डेलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते मोनिका, तिमीलाई कस्तो छ, तपाईंलाई मन पर्यो?
हामीले यो मन पराउनुभयो! हामी यसलाई ताजा कालो मिर्च संग सेवा गर्छौं र यो स्वादिष्ट, नरम र हल्का थियो। म यसलाई "सामान्य" खण्डमा पास गर्छु, धेरै धेरै धन्यवाद!
म खुशी छु, मोनिका। मलाई पनि यो धेरै मन पर्छ। हामीलाई हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यबाद।
नमस्ते केटीहरू, म वाष्पीकरण गरिएको दुध प्रतिस्थापन गर्न के प्रयोग गर्न सक्दछु ??
नमस्कार एलेना! म तपाईंको पृष्ठमा सदस्यता लिन पाउँदा खुसी छु, मलाई खाना पकाउन मन पर्छ र म एक थर्मोमिक्स उत्साही हुँ, मैले भर्खरै दोस्रोलाई किनें, जो अर्को9बर्षको छ जुन मैले मेरी छोरीलाई दिएकी छु। मैले अहिलेसम्म तपाईंको नुस्खाको केही पनि बनाएको छैन, म तपाईंलाई नतिजा बताउनेछु, सेभिलबाट अभिवादन र तपाईंको पहलका लागि धन्यवाद र बधाई।
स्वागत छ, कार्मेन! म तपाईलाई हाम्रो ब्लग मन पराउँछु खुशी छ र म आशा गर्दछु कि तपाइँ हाम्रा रेसिपीहरू मनपराउनुहुनेछ। शुभकामना।
हेलो एलेना! म तपाईको ठट्टासँगै खुसी छु, म खाना पकाउँदै र THERMOMIX को प्रशंसकको साथ छु। म साझा र सिक्न आशा गर्दछु। शुभकामना
धेरै धेरै धन्यवाद, मारी कारमेन! तपाईलाई हाम्रो ब्लग मन परेकोमा म धेरै खुसी छु। शुभकामना।
प्रभावशाली! तपाईं महान कुक हुनुहुन्छ।
मैले तपाईंको धेरै पकाउने विधिहरू बनाएको छु र सबै उत्कृष्ट छ, त्यसैले यो कम हुने थिएन।
म तिमीलाई धेरै मन पराउँछु, भोरो! शुभकामना।
धेरै धनी, तर धेरै मीठो। मलाई यो मन पर्यो तर बच्चाहरू यति धेरै छैनन् ... मलाई लाग्छ अर्को पटक क्लासिक do
तपाईं बिल्कुल सही हुनुहुन्छ, क्रीम मीठो छ तर गर्मीमा यसलाई कोशिस गरेर किन यो चिसो पिएन जस्तो गरी यो गजापाचो हो? तपाईं कसरी यो यति मिठो छैन देख्नुहुनेछ।
म सामग्रीको वजन जान्न चाहन्छु ... म ला कोकिनामा नयाँ हुँ र मलाई don't पोर्ट र तीन ब्लकको बराबर के हो थाहा छैन…। तपाईको व्यंजनहरु को लागी धेरै धन्यबाद
नमस्ते मारिया, केहि व्यञ्जनहरु मा कडाई केहि ग्राम को लागी रहन को लागी महत्वपूर्ण छ, तर यस अवस्थामा हामी "4 लीक" राख्छौं किनभने यसले केहि फरक पर्दैन कि यो धेरै वा कम छ। एक नियमको रूपमा, जब तपाइँ एक नुस्खामा यी प्रकारका सामग्रीहरूको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ, तिनीहरूले मध्यम आकारको लीक र स्याउलाई बुझाउँछन्, न त धेरै ठूलो वा धेरै सानो। त्यसोभए तपाईंले उत्पादनको बाँकी कुनै पनि बर्बाद गर्नु पर्दैन किनभने हामी यसलाई पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्नेछौं। मलाई आशा छ कि मैले तपाईको शंका मारियालाई स्पष्ट पारेको छु। अँगालो 🙂
क्रीमी पेस्तो, कालो जैतुन र धूम्रपान बेकनको साथ लि L्गुनी
मूल विधि: अरोरा सॉस